Fanaaniinta Xidigaha Geeska oo Maalinki labaad u xiran Somaliland – Radio Daljir
Seteembar 28, 2015 10:30 b 0
Isniin, September 28, 2015 (Daljir) —Somaliland ayaa xabsiga dhigtay afar fanaan oo ka tirsan kooxda Xiddigaha Geesta oo xaruntooda weyn tahay magalada Hargaysa, ka dib markii ay bandhig faneed cidii kusoo qabteen magalada Muqdisho.
Fanaaniinta la xiray oo kala ah Nimcaan Cabdiraxmaan(Nimcaan Hillaac), Xamda Cabdikariin (Xamda Queen), Maxamed Axmed Bakaal (Cirro) iyo Cabdiraxmaan Caydiid Oday ayaa markey kasoo dageen madaarka diyaaradaha Cigaal waxaa horay usoo kaxeeyay ciidanka Somaliland, wasiir ku xigeenka warfaafinta Somaliland oo VOA la hadlayayna wuxuu sheegay inay nidaamka dowladiga ah hareer mareen oo Muqdisho heeso kusoo qabteen.
Hoggaamiyaha kooxda Xiddigaha Geesta Abwaan Xasan Dhuxul Laabsalaax ayaa warbaahinta la iska arko u sheegay inay ka xun yihiin xariga dowladda Somaliland u gaystay afarta fanaan oo Muqdisho ciidii show kusoo qabtay, Laabsaalax waxa uu sheegay inaysan waxba ka jirin wararka sheegaya inay ka tirsan yihiin wasaradda warfaafinta oo ay mushahar ka qaataan.
Abwaankan ayaa sheegay inay tahay wax lala yaabo sababta loo beegsanayo fanaaninta kooxdan oo ka mid ah kuwa aan xaduudka ahayn ee dhulka Soomaaliidu degta ka heesa, isagoo hadlaya Abwaan Xasan waxa uu sheegay inay la mid yihiin ganacsatadda iyo suxufiyiinta.
Ma jirto ilaa iyo hada war ku saabsan sababta loo haysto afarta fanaan oo mamulka Axmed Siilaanyo kaso baxay, hase yeeshee fanaaniinta iyo shacabka taageera kooxda ayaa falkan xariga ah cambaareeyay kuna tilmaamay inay tahay arrin la siyaasadeeyay.
Kooxda Xiddigaha Geesta ee Hargaysa ayaa ka mid ah fanaaniinta sida dhow dhalinyaraddu u dhagaystaan heesahooda, kuwaasoo mararka qaarkood bandhig faneedyo kusoo sameeya dalka dibadiisa.
Kulan looga Hadlayay Ilaalinta Deegaanka oo lagu Qabtay Gaalkacyo